Amagama kaGoogle: Gcina izibini ezitshatileyo ... | Martech Zone
Amagama kaGoogle: Gcina izibini ezitshatileyo…
NgoLwesine, Julayi 5, 2007 NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 Douglas Karr
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndamangaliswa xa ndabona intengiso yam yeAdwords kwiwebhusayithi yam. Kubonakala kusisiyatha kum ukuba iAdwords zikaGoogle azicoci ngaphandle kwesizinda esizaliswayo.
Ke-ukuba ufuna ukugcina isibini semali kwaye ungabinabantu bacofe kwintengiso yakho ukuza kwindawo YAKHO ukuba yenzekile, khumbula ukongeza indawo yakho kwifilitha yakho yokhuphiswano kwiGoogle Adsense.
NguJulayi 4th: Inkxaso yeNkululeko yokuBloga eMelika
Jul 5, 2007 ngo-10: 29 AM
Ndingene nje ekwenzeni iGoogle AdWords emsebenzini. Ngaba zikhona iincwadi ezilungileyo ngalo mbandela onokuthi ucebise ngazo? Enkosi.
Jul 5, 2007 ngo-11: 13 AM
Andiqinisekanga- kodwa jonga Iqhawe lePCP -Yibhlog exhaswe ngumlingane wam, Pat eMpuma. Babalasele kuyo-ndiyinto entsha!
Jul 5, 2007 ngo-7: 14 PM
Enkosi uDoug. Ndizakuyijonga…
Jul 6, 2007 ngo-1: 32 AM
Iyavakala ukuba ayiqhelekanga. Khange ndiyazi ukuba iGoogle AdWords ayizicoci ngokuzenzekelayo indawo elungiselelwe yona yentengiso.
Enkosi ngokuthumela malunga nale bhlog yakho! Kuya kufuneka ndijonge ukuba azibonisi ezam iintengiso kwiindawo zam zobuqu.